Qasaarihii ugu badnaa oo ka dhashay dagaalkii Tukaraq (Tirada dhimasha iyo Gaadiid la kala qabsaday) – Gobolada News Agency
Qasaarihii ugu badnaa oo ka dhashay dagaalkii Tukaraq (Tirada dhimasha iyo Gaadiid la kala qabsaday)
15/05/2018 Warqaad Wararka
Warar is khilaafsan ayaa kasoo baxaya dagaal qaraar oo dhimasho badan dhaliyey oo maanta degaanka Tukaraq ku dhex maray ciidamada Somaliland iyo Puntland.
Puntland ayaa sheegatay in dagaalka oo socday saacado badan oo ay ku ileen askar badan oo Somaliland ka tirsan oo ay ku jiraan saraakiil, isla markaana ay gubeen saldhigii ciidamada Somaliland ee Tukaraq iyadoo qabsaday degaankaasi.
Tirada dhimashada ayaa la sheegay in inay ku dhowdahay 40 askari oo labada dhinac ah iyo dhaawaca in ku dhow 100, waxaana dhinaca Puntland laga qabsaday saddex gaari oo ku wadagaalka ah, halka Somaliland laga qabsaday laba Gaari oo uu ku jiro Beebbe.
Puntland ayaa xaqiijisay 17-askari looga dilay dhinacooda, lagana dhaawacay 34-kale. “Ciidanku waxay duhurnamadii maanta Gudaha u galeen Tuulada Tukaraq laakiin waxay galinkii dambe maanta uga ruqaansadeen Dhinaca Galbeedka halkasoo ay isku urur sanayeen Maleeshiyaadkii laga saaray Magaalada, Waxaana halkaas ka bilowday Dagaal socdey Sadex saac Ilaa makhribkii dagaalku istaagay” ayuu lagu yiri war kasoo baxay Maamulka Puntland.
Puntland waxa ay Sheegeen in ay gacanta ku dhigeen Afar gaari oo ah Nuuca Dagaalka, halka ay Gubeen 9-kale, Dhankoodana 6-Gaari dagaal oo uu ku jiro Taangi Khasaare ay waxyeelo ku gaartay Dagaalka, waxa ayna Meesha ka saareen Gaadiid laga qabsaday.
Dagaalka oo laga cabsi qabo inuu mar waliba dib u qarxo ayaa ahaa kii ugu qasaaraha badnaa ee labada dhinac dhex mara labada maamul.
The post Qasaarihii ugu badnaa oo ka dhashay dagaalkii Tukaraq (Tirada dhimasha iyo Gaadiid la kala qabsaday) appeared first on .
Previous Post:Sawiro:-Taliyaha Ciidanka Booliska oo kormeer kedis ah ku tagay xarunta Gaadiidka Booliska
Next Post:Maainta Berri ah oo la dhameystirayo 30-ka Shacbaan.
Wasaarada amniga oo war ka soo saartay Rasaas lagu riday xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka
May 25, 2018 Muqdisho-KNN-Wasaarada
Urur goboleedka IGAD oo sheegtay in markale Duufaano ay ku soo wajahan yihiin Soomaaliya
May 25, 2018 Muqdisho-KNN-Urur
DHAGEYSO:-WARKA DUHUR EE RADIO KULMIYE(25-05-2018)
May 25, 2018 Muqdisho–KNN:–Dhageystayaasha
Howlgallo Waddo furis ah Oo ka socda gobolka Jubbada Hoose
Wareega labaad ee Tartanka Shabelle Oo Caawa bilaabanaya
Madaxweyne Farmaajo “Shuruud la’aan hala joojiyo Dagaalka Tukaraq”.
May 25, 2018 Madaxweynaha
Somaliland oo Soo Bandhigtay Ciidamo ay sheegtay in Puntland ay kasoo goosteen.
May 25, 2018 Maamulka
Qarax dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay bartamaha magaalada Benghazi.
May 25, 2018 Ugu
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay dagaalkii Tukaraq.
May 25, 2018 Maalin
Beesha caalamka oo ka walaacsan colaada Tukaraq.
May 25, 2018 Saaxiibada
Facebook oo dalbanayaa in aad la wadaagto sawirkaaga oo qaawan !
May 25, 2018 Barta